မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: မြန်မာစစ်တပ်ရှိ တရုပ်ပြည်လုပ် စစ်လက်နက်များ “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
မြန်မာစစ်တပ်ရှိ တရုပ်ပြည်လုပ် စစ်လက်နက်များ
၁၊ မြန်မာ စစ်တပ်သည် လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုနှင့်အတူ ပေါ်ပေါက်လာသော စစ်တပ်ဖြစ်ပြီး ၁၉၈၈ မတိုင်မီအထိ မြန်မာ့တပ် မတော်အတွင်း အမှန်တကယ် အမှုထမ်းလိုသူ များစွာဖြင့် ဖွဲ့ စည်းထားသော တပ်မတော် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
သို့ ပါသော်လည်း ၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် အရာရှိအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ၀င်ရောက်လာသူမှ အပ ကျန်စစ်မှုထမ်းများမှာ ၀င်ရောက်မှုနည်းပါးပြီး။ အရပ်ဘက်ရုံးများတွင် ၀င်ရောက် မလုပ်ကိုင်နိုင်သူများ အဓမ္မစုဆောင်းမှုဖြင့် ၀င်ရောက်လာသူများ။ အချိုးကျ စံနစ်ကြောင့် ၀င်ရောက် လာသူများသာရှိပြီး အရည် အချင်းထက် အရေအတွက်ကိုသာ ဦးစားပေးမှုများ လာကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်၊
၂၀၀၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် အရပ်ဘက်ဌာနများ အလုပ်အကိုင်ရရှိရန် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း ရရှိသော အလုပ်အကိုင်မှာ ၀င်ငွေ နည်းပါးခြင်းကြောင့် ဆယ်တန်းအောင်မြင်ပြီး ငွေကြေးချို့ တဲ့သော အောက်ခြေ လူတန်းစားများမှ စစ်တပ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြောင်း တွေ့ ရှိရသည်၊ ဆယ်တန်းအောင်မြင်ပြီး သူများအား (၁) တပ်မတော် ကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ် (၂) တပ်မတော် နည်းပညာ တက္ကသိုလ် (၃) တပ်မတော် နည်းပညာကောလိပ် (၄) တပ်မတော် ဆေးတက္ကသိုလ် (၅) တပ်မတော် သူနာပြု တက္ကသိုလ်များကို ဖွင့်လှစ်ပြီး ၀င်ရောက် အမှုထမ်း စေခြင်းဖြင့် စစ်တပ်အတွင်း ပညာ အရည်အချင်း မြင့်မားရေးကို အာရုံစိုက်လာကြောင်း တွေ့ ရရှိရပြီး တိုက်ပွဲဝင် တပ်ရင်း တပ်ဖွဲ့ များတွင်မူ ပညာ အရည်အချင်း နည်းပါးသူများမှာ အများစု ဖြစ်သည်ကို ဖုံးကွယ်မရနိုင်ပေ၊ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းတွင် သောင်းကျန်းမှု နှိမ်နင်းရေး စစ်တပ် အသွင်မှ ပြည်ပ ကျူးကျော်စစ်ကို တွန်းလှန်ရန် ရည်ရွယ် သမားရိုးကျ စစ်တပ်အသွင် ဆောင်ပြီး ၄င်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာ လက်နက်တပ်ဆင်မှုနှင့် လက်ရုံး ၀န်ထမ်းတပ်များကို ပြင်ဆင်တိုးချဲ့ ဖွဲ့ စည်းခြင်း စစ်တပ်ဌာန အသစ်များဖွဲ့ စည်းခြင်း လက်နက်တပ်ဆင်ခြင်း စစ်အင်အား အဆမတန် တိုးချဲ့ ခြင်းကို ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း တပ်တွင်းတိုက်ပွဲဝင် စစ်သည်များမှာ ပညာ အရည်အချင်း နည်းပါးမှုကြောင့် ထင်သလောက် ခရီးမပေါက်ခဲ့ပါ၊
စစ်တပ် အသစ်သည် စစ်လက်နက်အသစ်များနှင့် ပစ္စည်းများကို အရာရှိများနှင့် သီးခြားရွေးချယ် လေ့ကျင့်ထားသည့စစ်သည်များကို သင်ကြားလေ့ကျင့် ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ကျန်စစ်လက်နက်များကို သိမ်းဆည်း ထားနိုင်မှုသာ အများဆုံး ဖြစ်နေကြာင်း တွေ့ ရှိခဲ့ရသည်၊ စစ်သည်များ အနေဖြင့်လည်း အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းမှုအနေဖြင့်သာ စစ်တပ်အတွင်း ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်နေပြီး သာမာန်အမိန့် အတိုင်း လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်မှုသာ ရှိပြီး မည်သည့် ခွန်အားစိုက်ထုတ်မှု မျှ မသုံးဘဲ သာမာန် လေ့ကျင့်မှု အခြားလေ့လာ စူးစမ်းမှု များ မရှိကြောင်း တွေ့ ရှိရသည်၊
စစ်တပ်အခြေခံ ဖွဲ့ ည်းပုံ လက်နက်တပ်ဆင်ပုံများ
၂၊ စစ်တပ်ဘာသာစကားဖြင့် မြန်မာစစ်တပ်ကို ၃ှ၃ စံနစ်ဖြင့် ဖွဲ့ စည်းထားခဲ့သည်၊ တပ်စိပ် တစိပ်တွင် အင်အား ဆယ်ယောက်။ အဖွဲ့ (၃) ဖွဲ့ ။ အဖွဲ့ တဖွဲ့ တွင် အကူ (၃) ယောက်။ တပ်စု တစုတွင် တပ်စိပ်(၃)စိပ်၊ တပ်ခွဲတ ခွဲ တွင် တပ်စု(၃)စု၊ တပ်ခွဲ(၄) ခွဲတွင် တပ်ရင်းတရင်း၊ တပ်ရင်း(၃) ရင်းတွင် စစ်ဗျူဟာ တခု၊ စစ်ဗျူဟာ(၃)ခုတွင် တပ်မ(၁) မဟှူု အခြေခံဖွဲ့ စည်းထားသည်၊ တပ်မ အထက်တွင် အုပ်ချုပ်မှု နှင့် နယ်မြေထိန်းသိမ်းရေးတာဝန်ခံ အဖြစ် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်များ ဖွဲ့ စည်းထားရှိခြင်း တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်များကို စစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့များမှ နယ် မြေဒေသအလိုက်တာဝန်ယူကွပ်ကဲသည်၊ စစ်ဆင်ရေး အထူးအဖွဲ့ များသည် အောက်ပါအတိုင်းတိုင်း စစ်ဌာန ချုပ်များအလိုက် တာဝန်ယူ ကွပ်ကဲသည်၊
( က) အမှတ်(၁) စစ်ဆင်ရေး အထူးအဖွဲ့ မှူး (မပခ။ ရမခ။ တတခ)
( ခ )အမှတ်(၂) စစ်ဆင်ရေး အထူးအဖွဲ့ မှူး (လပခ။ နေပြည်တော်။ ရပခ)
( ဂ ) အမှတ်(၃) စစ်ဆင်ရေးဒေသ အထူးအဖွဲ့ မှူး ( ရတခ။ တပခ။)
(ဃ) အမှတ်(၄) စစ်ဆင်ရေး အထူးအဖွဲ့ မှူး (ရတခ။ ကခရ)
(င ) အမှတ်(၅) စစ်ဆင်ရေး အထူးအဖွဲ့ မှူး ( ရန်ကုန်တိုင်း )
(စ ) အမှတ် (၆) စစ်ဆင်ရေး အထူးအဖွဲ့ မှူး ( နပခ။ နမခ )
၃၊ စစ်တပ်အတွင်း အသုံးပြုသည့် အခြေခံကျ လက်နက်ငယ်များ။ မော်တာများ ။ ဒုံးပစ်လောင်ချာများ။ တင့်ကားဖျက်လက်နက်များ။ မိုင်းများနှင့် စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများကို ပြည်တွင်း၌ပင် ထုတ်လုပ် ရန်ကြိုးစားလျှက်ရှိပြီး အချို့ စက်ရုံများမှ ထုတ်လုပ်မှု ပြုလုပ်နေသည်ကို တွေ့ ရှိရပါသည်၊ ထုတ်လုပ်မှု အနေဖြင့် ၁၉၈၀ မတိုင်မီအချိန်က ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းစက်ရုံ (၆) ရုံသာ ရှိခဲ့သော်လည်း ( ၁၉၈၈မှ ၂၀၀၃) တွင် ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်း စက်ရုံ (၂၃) ရုံအထိ တည်ဆောက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီး ယင်းစက်ရုံများနှင့် အမှတ်(၂) စက်မှုဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ အကြီးစား စက်မှု လုပ်ငန်း စက်ရုံများ နှင့် ဆက်သွယ် ထုတ်လုပ်မှုများ ပြုလုပ်လာခဲ့သည်၊ အကြီးစား စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းစက်ရုံများ ပူးပေါင်း၍ တင့်ကားနှင့် သံချပ်ကာ လူသယ်ယဉ်များ တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၂၀၀၃ခုနှစ်တွင် အကောင်အထည်ဖော် အောင်မြင်မှု ရှိခဲ့သည်၊
ဥပမာ၊ ၊ တရုပ် ကုမ္ပဏီများနှင့် ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းစက်ရုံ အမှတ်(၆) တို့ ပူးပေါင်း၍ အင်းတကော် စက်မှု ဇုန်တွင် မြင်းကောင်(၅၀၀၀) အထိ ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် ဒီဇယ်အင်ဂျင်စက်ရုံ။ ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ ပြုလုပ်တပ် ဆင်နိုင်သည့် စက်ရုံများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အကောင်းစား သံမဏ္ဍိပြား ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ရှမ်းပြည်နယ် အောင် ပန်းမြို့ နယ် ဒူးရင်းပိုက် ကျေးရွာတွင် သံမဏ္ဍိပြား စက်ရုံကိုတည်ဆောက်ခြင်း။ အကြီးစား ယာဉ်များနှင့် အသွင် သဏ္ဍာန်တူသည့် မြေအောက်ဥမင် တူးစက် ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများကို တရုပ်စစ် လက်နက် ပစ္စည်း ကုမ္ပဏီများနှင့် ပေါင်းစပ် တည်ဆောက်ခဲ့သည်၊ (မှတ်ချက်၊ ၊ စက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်းသည် အသွင်သဏ္ဍာန် မတူညီမှု ကို ပေါင်းစပ်၍ ပြည်တွင်း တုပပြုလုပ်ခြင်း ပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်၊
၄၊ စစ်တပ်အနေဖြင့် ကာကွယ်ရေးပစ္စည်း စက်ရုံများမှ ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် ပစ္စည်းများမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်သည်၊
(က) ချေမှုန်းရေး ရိုင်ဖယ်များ ( ဗအအခွေျ့င်ူန)
ဗြ( ၁၏၂၏၃၏၄) အုပ်စု ချေမှုန်းရေး ရိုင်ဖယ်။ ၄င်းကျည် ၅.၅၆၊
ွ၂ွ၃ွ၎ အုပ်စု ချေမှုန်းရေး ရိုင်ဖယ် ၄င်းကျည် ၇.၆၂ ။။
(ခ) စိန်ပြောင်း သြအမေ ၊ တပ်စုအဆင့် ၅ကာ စိန်ပြောင်း
တပ်ခွဲအဆင့် ၆၀ာာ ။ ၈၁ာာ တပ်ရင်းအဆင့် ၁၂၀ာာ စိန်ပြောင်းနှင့် ၄င်းဗုံးသီးများ
(၂) နောက်ပွင့် ရိုင်ဖယ်ျွနခခငူနျွင်ူန ။ ၈၁ာာ နောက်ပွင့် ရိုင်ဖယ် ၄င်းကျည်များ
(၃) လောင်ချာ(ူတေညခ့နမ) ။။ ၄၀ာာ ဒုံးပစ်လောင်ချာ(ဗြ၇)။
၁၀၇ာာဒုံးပစ်လောင်ချာ(ဗြ၁၁)။ ယင်းကျည် အမျိုးမျိုး။။
(၄) ယဉ်တင် ဒုံးပစ်လောင်ချာများ၊ စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နေပြီဖြစ်သည်၊ ၄င်းတို့ ကို တရုပ်နည်းပညာဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ကာကွယ်ရေးပစ္စည်း စက်ရုံ အမှတ် (၁၃)တွင် ထုတ်လုပ်လျှက်ရှိသည်၊
၅၊ ကြည်းတပ်အတွက် စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများကို တရုပ် ယူကရိန်း ရုရှား တောင်အမေရိက ပါကေစ္စတန်နှင့် အိန္ဒိယတို့ မှ အဓိက ၀ယ်ယူလျှက်ရှိပြီး တရုတ်နိုင်ငံမှ အများဆုံးဝယ်ယူပြီး ပါကေစ္စတန် အိန္ဒိယနှင့် ယခင် လက် ကျန် စစ်လက်နက် ပစ္စည်းများ အတွက် လိုအပ်သည့် အပိုပစ္စည်း ခဲယမ်းများ ၀ယ်ယူခဲ့သည်၊
ဥပမာ၊ ၊ ကြည်းတပ်။ အမြောက်တပ်ဖွဲ့ များတွင် အသုံးပြုနေသည့် ၁၀၅ာာ ကောင်းကင်ပစ် အမြောက်များအတွက် လိုအပ်သည့် ခဲယမ်းများကို ပါကေစ္စတန် အိန္ဒိယ ဗီယက်နမ်တို့မှ၎င်း။ ကာဘိုင်ကျည်များကို ဗီယက်နမ် စစ်လက်ကျန်မှ၎င်း၊ ၁၀၅ာာ အမြောက်နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများကို တောင်အမေရိက။ ပါကေစ္စတန် အိန္ဒိယ ဗီယက်နမ် တို့ မှ၎င်း။ ၈၄ာာ တင့်ဖျက် ဒုံးကျည်များကို စင်္ကာပူ မှ၎င်း ၀ယ် ယူခဲ့သည်၊
(၁) ကြည်းတပ်သုံး အမြောက်များ။ ။ အမြောက်များကို ၁၀၅ာာ အမြောက် အမေရိကန်နိုင်ငံလုပ် ၁၉၇၃ခုနှစ် စတင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး ၄င်းအမြောက်များသည် ပေါ့ပါးခြင်း သယ်ယူရလွယ်ကူခြင်း ပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာနှင့် လိုက်လျော ညီထွေမှု ရှိခြင်းတို့ ကြောင့် စွန့် ပစ်ခြင်းမရှိဘဲ ပါကေစ္စတန် အိန္ဒိယ ဗီယက်နမ်တို့ မှ ထပ်ဆင့် မှာယှူု လက်နက်ခဲယမ်းမျာကို ထပ်မံ ဖြည့်တင်းခဲ့သည်၊ အမြောက်တပ်ရင်းကြီးများတွင် ၁၀၅ာာ အမြောက် တပ်ဖွဲ့ ကို ဖွဲ့ စည်းပုံ အသစ်တွင် ထပ်မံထည့့််သွင်း ဖွဲ့ စည်းခဲ့သည်၊
(၁) ၁၀၅ာာ အမြောက် အမေရိကန်လုပ်
(၂) ၁၅၂ာာ အမြောက် တရုပ်လုပ် ဏ၆၆
(၃) ၁၅၅ာာ အမြောက် တောင်အမေရိကလုပ်
(၄) ၁၅၅ာာ အမြောက် တရုပ်လုပ် ဏူဇ ၄၅
(ဂ) လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးလက်နက်များ
လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးကို ယခင်ဖွဲ့ စည်းပုံအရ အမြောက်နှင့် သံချပ်ကာ တပ်ဖွဲ့. လက်အောက်တွင် ထားရှိခဲ့သော်လည်း ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှ စတင်ှု လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး အရာရှိချုပ်ထားရှိကာ လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးကို အဓိကထား ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ ရှိရသည်၊ လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးအတွက် တပ်မဌာနချုပ်များတွင် ၄င်းတပ်ဖွဲ့ အား ဖွဲ့ စည်းချထားပေးခဲ့ပြီး တပ်ရင်းများတွင် တပ်စုဖွဲ့ စည်းပုံတွင် ဖွဲ့ စည်းထားခြင်းမရှိပေ၊ အရာရှိများကို ( ဗိုလ်နှင့်အထက် ခြေလျှင် ခြေမြန် တပ်ရင်းများမှ ရွေးချယ်ခေါ်ယှူု အမှတ်(၂) အရာခံ အကြပ်ကြီး သင်တန်းကျောင်း ရဲမွန်တပ်မြို့ ၊ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစ သင်ကြား လေ့ကျင့်ခဲ့သည်၊
(၁)ဒုံးများ၊ ၊ျှံ၆၁ှော ယာဉ်တင်။ြံ၅ေ။ခ ပခုံးထမ်းဒုံး တရုပ်လုပ်။ ဘဲလိုးဂိတ် ဗြိတိန်လုပ်
(၂) လေယာဉ်ပစ် စက်လက်နက် စက်သေနပ်ကြီးများ အမြောက်များ
(ကက) လေယာဉ်ပစ် အမြောက်များ ၈၅ွှာာဏ ၅၆ ၅၇ွှာာဏ၈၅
၃၅ွှာာဏ ၇၅ တရုပ်လုပ် .၅ာာ စက်သေနတ် အမေရိကန်လုပ်
(ခခ) စက်သေနတ် ၁၂.၇ွှာာဏ၈၀ ၁၄.၅ွှာာဏ၈၅ ၃၅ွှာာဏ၇၅ တရုပ်လုပ်
တင့်ဖျက်လက်နက်များ စစ်တပ်အတွင်း ၈၄ာာ ပခုံးထမ်း တင့်ဖျက်လက်နက် ဆွီဒင်နိုင်ငံ၊ ၇၅ာာ နောက်ပွင့်လောင်ချာ အမေရိကန်နိုင်ငံလုပ် ၈၁ာာ နောက်ပွင့် ရိုင်ဖယ် မြန်မာနိုင်ငံလုပ် များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်၊ ၈၄ာာ နှင့် ၇၅ာာ နောက်ပွင့်ရိုင်ဖယ်တို့ ကို တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ များမှ ပြန်လည်သိမ်းဆည်း။ (၂၀၀၁) တွင် ကက(ကြည်း) အရန်အဖြစ် သိမ်းဆည်းထားသည်၊ ၈၄ာာ တင့်ဖျက် အပိုပစ္စည်းနှင့် ခဲယမ်းများကို စင်္ကာပူ နိုင်ငံ မှ ၀ယ်ယူရရှိပြီး ၈၁ာာ နောက်ပွင့် ရိုင်ဖယ်အပိုပစ္စည်းနှင့် ခဲယမ်းများကို ပြည်တွင်း စက်ရုံများမှ ထုတ်လုပ်ပြီး တပ်ဖွဲ့ များတွင် အသုံးပြုလျှက်ရှိသည်၊
တရုပ်နိုင်ငံမှ မှာယူအသုံးပြုသည့် တင့်ဖျက်လက်နက်များမှာ
(၁) မဋားနီ ၀ါယာကြိုးတပ် ပဲ့ထိန်းဒုံး တရုပ်နှင့် ၄၀ာာ ဒုံးပစ်လောင်ချာ ည=ကဍ့်ပါ ပဲ့ထိန်းဒုံး
၁၉၅၀ နောက်ပိုင်းမှ စှု တရုပ်နိုင်ငံမှ အဓိက၀ယ်ယူခဲ့ပြီး ကမ်းရိုးတန်းနှင့် သီးသန့် စီးပွါးရေးဇုန်များ။ လုံခြုံရေးအတွက် စံနစ်တကျ တည်ဆောက်ခဲ့သည်ကို တွေ့ ရှိရသည်၊ ရေတပ် အခြေစိုက်စခန်း အနေဖြင့် ဟိုင်းကြီးကျွန်း ရေတပ် စခန်းဌာနချုပ်၊ ဧရာဝတီ ရေတပ်စခန်း ဌာနချုပ်၊ တနင်္သာရီ ရေတပ်စခန်းဌာနချုပ် ပြုလုပ်ထားရှိုပီး ဟိုင်းကြီးကျွန်း ကုလားကုတ်ကျွန်း ကိုကိုးကျွန်းနှင့်မော်စကုတ်ကျွန်းတို့ တွင် ရေတပ်ရေဒါများကို တရုပ်နိုင်ငံမှ မှာယူတပ်ဆင်ခဲ့သည်၊ တနင်္သာရီတိုင်း ရေဖြူမြို့ နယ် ကံပေါက်ဒေသ အနီးရှိ ကဒိုက်ကျွန်းနှင့် ထားဝယ်မြို့အနီး မော်စကုတ်ကျွန်းတို့ တွင် ၁၉၉၄။ ၉၅မှစ၍ကျွန်းအခြေစိုက် အထူးရေတပ်စခန်းပြုလုပ် လေယဉ်တင် သင်္ဘောကဲ့သို့ခေတ်မီစစ်သင်္ဘော ဆိုက်ကပ် ဖြည့်တင်းနိုင်ရန် ရေတပ် အခြေစိုက် စခန်းတည်ဆောက်လျှက်ရှိရာ ၂၀၀၃တွင် ၆၅ ရာခိုင်နှုန်း ပြီးစီးခဲ့သည်၊ ရေတပ် အနေဖြင့် အဓိကဖြည့်တင်းသည့် ရေယဉ်များမှာ အမြန် တိုက်ခိုက်ရေးယဉ်များ ရေငုပ်သင်္ဘောဖျက်။ တိုက်သင်္ဘောများ မိုင်းရှင်းလင်းရေးယဉ်များ ၀ယ်ယူအားဖြည်ခဲ့သည်၊
(က) တရုပ်တပ်မတော်ရေမှ ပိုလဋံသဍ့် (ံနင်္နျွှ) အတန်းအစား ရေယဉ် င်္ဗဃ ( င်္မသညအ ဗအခေု ဃမအေအ) ဆယ်စင်းကို အမှတ်စဉ် ၄၄၀မှ ၄၄၉ ထိ သတ်မှတ်ထားရှိခဲ့သည်၊
(ခ) ရေငုပ်သင်္ဘောဖျက်တိုက်ရေယဉ် ၊ ၊ တရုပ်ရေတပ်မတော်မှ ပိုလဋံသဍ့်ံ့ဥြွ င်္ဥြွ အမျိးအစား ရေငုပ်သင်္ဘောဖျက် တိုက်ရေယဉ် (၅) စင်းကို ၀ယ်ယှူု အမှတ်စဉ် ၄၅၀မှ ၄၅၄ ထိ သတ်မှတ်ထားရှိခဲ့သည်၊
(၈) မိုင်းစစ်ဆင်ရေးယဉ် ၊ ၊ တရုပ်ရေတပ်မှ ပိုလဋံသဍ့်ြှုနျြွှဗျွ င်္ဥျွဃနှ ဃျွင်္ဗွှ မိုင်းစစ်ဆင်ရေးယဉ် (ံဗှုဗြ ဃူဗှ) သုံးစီး မှာယူခဲ့+ပီး လက်ရှိ အသုံးပြုလျှက်ရှိသည်၊
(ဃ) ဒုံးပျံတင် ဖရီးဂိတ်သင်္ဘောများကို ၁၉၉၇မှစှု မှာယူအသုံးပြုသည်ဟု သိရှိရ+ပီး မည်သည့် အမျိုးအစား ဖြစ်သည်ကို မသိရှိရသေးပါ၊
၇၊ ပြည်တွင်းရှိ ရေတပ်သင်္ဘောကျင်းများနှင့် ရေလုံ သင်္ဘောကျင်းများ သည် တန်ချိန် ၁၀၀၀ အထိ ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး ကမ်းရိုးတန်း ကာကွယ်ရေး တိုက်သင်္ဘောများကို လွန်းတင် ပြင်ဆင်နိုင်သည်၊ တန်ချိန် ၂၀၀၀ အထက် ရေတပ်သင်္ဘောများကို လွန်းတင် ပြင်ဆင်နိုင်ရန် အတွက် ၂၀၀၅ခုနှစ်မှ စှု ပို့ ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ဒလသ င်္ဘောကျင်းတွင် တန်ချိန် ၁၀၀၀၀ လွန်းတင် ဆောင်ရွက် နိုင်သည့် ရေလုံသင်္ဘောကျင်းကို တည် ဆောက်လျှက်ရှိရာ ၄င်းတည်ဆောက်မှုကို အရံအင်ဂျင်နီယာ လုပ်ငန်းစုမှ ကူညီဆောင် ရွက်လျှက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်၊
၈၊ လေတပ်အနေဖြင့် ၁၉၈၈ မတိုင်မီ ဂျက်လေယာဉ်များ ၀ယ်ယူ အသုံးပြုမှု နည်းပါးခဲ့သော်လည်း ၁၉၉၂တွင် ယူဂိုဆလား ဗီးယားနိုင်ငံလုပ်(၄) တိုက်လေယာဉ် (၁၂)စီးကို ၀ယ်ယူခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် တရုပ်နိုင်ငံမှ (ဗ၅) မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးယဉ် (ဗ၇) =ကားဖြတ် တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ်များကို ၁၉၉၆ နောက်ပိုင်းတွင် ၀ယ်ယူ အသုံးပြု လာခဲ့သည်၊ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများ. လေကြောင်း အားသာမှုကို တန်ပြန်ရန် အတွက် ၂၀၀၄ခုနှစ်တွင်ြွှု ၇ွ တိုက်လေယာဉ် နှစ်အုပ် ထပ်မံ ၀ယ်ယူခဲ့ပြီး တရုပ်နိုင်ငံမှ ၈ တိုက်လေယာဉ်များ ၀ယ်ယူ အသုံးပြုခဲ့သည်၊
(၁) (ွ၎)ယူဂိုဆလားဗီးယားလုပ် (၁၂)စီး ( တိုက်-၁၀။ မောင်းနှစ်ဦး)
(၂) (ဗ၅) တရုပ်နိုင်ငံလုပ် (၂၀) စီး ( တိုက်-၁၈။ မောင်းနှစ်ဦး)
(၃) (ဗ၇) တရုပ်နိုင်ငံလုပ် (၂၀)စီး ( တိုက်-၁၈။ မောင်းနှစ်ဦး)
(၄) (ဲ၈) တရုပ်နိုင်ငံလုပ် (၁၀)စီး (တိုက်-၉။ မောင်း၁ဦး)
(၅) (ြွှု ၂၉) ရုရှားနိုင်ငံလုပ် (၁၀)စီး ) (တိုက်-၉။ မောင်း၁ဦး)
(၁) ဘဲလ် (၂၀၅) အမေရိကန်လုပ်
(၂) ဘဲလ် (၂၀၆) အမေရိကန်လုပ်
(၃) မီ(၂) ပိုလန်လုပ်
(၄) မီ (၁၇) ယူကရိန်းလုပ်
(ဂ) သယ်ယူပိုဏ္ဍဆောင်ရေး ယာဉ်
(၁) ဖော်ကာ င်္၂၇ တာဘို ဟော်လန်လုပ်
(၂) ဖော်ကာ င်္၂၈ ဂျက် ဟော်လန်လုပ်
(၁)ဲဇ၅ (၄)စီး တရုပ်နိုင်ငံလုပ်
(၂)ဲဇ၆ (၅)စီး တရုပ်နိုင်ငံလုပ်
(၃) မြန်မာနိုင်ငံလုပ် (၂)စီး
( င) လေ့ကျင့်ရေးလေယာဉ်
(၁)ဲ၆ (၅)စီး တရုပ်နိုင်ငံလုပ်
(၂)ဲ၇ (၅) စီး တရုပ်နိုင်ငံလုပ်
Posted by အာဇာနည် at 12:21 PM